Kedu ihe bụ RCS na gịnị ka ọ na-enye anyị | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe bụ RCS na gịnị ka ọ na-enye anyị
Tupu ọbịbịa nke ngwa izipu ozi na ịntanetị, SMS bụ naanị ụzọ iji zipu ozi ederede na nọmba ekwentị ndị ọzọ, ozi ederede nke furu efu nakwa na ha abụghị ọnụ ala. N’oge na-adịghị anya, MMS bịarutere, na-ede ozi ederede nke anyị nwere ike isonyere ya na onyogho nke ọnụahịa ya adịghị mma.
Mgbe ọbịbịa nke WhatsApp, ndị ọrụ ahụ hụrụ otu akụkụ dị mkpa nke ego ha na-ada. Ka afọ na-aga, na ekwentị nọchiri ekwentị, ojiji nke SMS belatara ihe fọrọ efu. Nanị ihe ọzọ ndị ọrụ ahụ hụrụ bụ ịmalite ikpo okwu izi ozi nke ọrụ ya bụ WhatsApp.
Ọ na-aga n'ekwughị na ngwa a abanyeghị na ahịa ahụ ma ndị ọrụ ahụ kwụsịrị ya ngwa ngwa. Ka afọ na-aga, ngwa izi ozi ndị ọzọ dịka Telegram, Line, Viber, WeChat, Signal, Messenger, Skype bịarutere ... Ndị na-arụ ọrụ ahụ etinyela na akwa nhicha ahụ na ha enweghị mmasị n'inye ihe ọzọ metụtara ya na ngwa.
1 Mmalite nke RCS
2 Kedu otu RCS si arụ ọrụ
3 Nke ahụ na-enye
4 Etu esi enyere ma ọ bụ gbanyụọ ozi RCS
Mmalite nke RCS
Ọ bụghị ruo mgbe 2016 (WhatsApp ka emepụtara na 2009 maka iOS yana na 2010 maka gam akporo ọ bụ ezie na ha amabeghị ewu ewu ruo mgbe 2012) mgbe, n'ime usoro nke MWC, ndị ọrụ telephony na-ekwupụta nkwekọrịta na Google na ọtụtụ ndị na-emepụta ama mejuputa onodu. Rich Cikwusa ozi Sozi (RCS) nakwa na akpọrọ ya bụrụ onye nọchiri SMS (Short Izi ozi Service).
N'ịbụ onye nọchiri SMS, usoro ọhụụ a nwere ebumnuche nke ịrụ ọrụ site na ngwa ederede ederede nke alaYa mere, ọ gaghị adị mkpa iji wụnye ngwa ngwa nke ndị ọzọ, ya mere, enwere ike izipu ozi na nọmba ekwentị ọ bụla na-enweghị onye natara chọrọ ịnwe ngwa, dịka WhatsApp, Telegram, Viber ...
Beingbụ ọrụ nkwukọrịta bara ọgaranya (Ntugharị Nkwukọrịta Ozi Ọkụ bara ụba) na mgbakwunye na izipu ederede, ọ ga-enye anyị ohere zipu faịlụ nke ụdị ọ bụla, bụrụ foto, vidiyo, audios ma ọ bụ ụdị faịlụ ọ bụla. Ebe ọ bụ na ha achọghị ngwa a kapịrị ọnụ, njedebe niile ga-adaba na ọrụ a, yabụ ọ dị mkpa ka ndị ọrụ na ndị nrụpụta njedebe kwenye itinye aka na ọrụ ọhụrụ a ebe ọ bụ na ha ga-enye nkwado maka RCS na ala gị Izi ozi ngwa jikwaa ozi ederede gị.
Microsoft na Google Ha bụkwa akụkụ nke nkwekọrịta dị mkpa iji nwee ike ịnye teknụzụ ọhụrụ a, ọ bụ nke ikpeazụ maka ihe doro anya ebe ọ bụ na smartphones niile rutere ahịa na gam akporo dị n'okpuru nche anwụ. Google ga-ahụ maka ịmalite ngwa ozi maka usoro okike gam akporo niile nke nwere ike iji usoro ọhụụ a mee ihe ma ọ bụrụ na onye nrụpụta emeghị nke a. Apple akwadobeghị ọrụ ọhụrụ a ma ugbu a ọ dị ka ọ ka na-ezubeghị ime taa.
Kedu otu RCS si arụ ọrụ
Nkwado maka RCS site na ndị nrụpụta malitere n'oge na-adịghị anya mgbe ndị isi ihe metụtara ọkwa nke nkwekọrịta ahụ. Ndị ọrụ ahụ malitekwara ịmalite ọhụụ ọhụrụ a, mana ọ dịghị onye na-eso ụzọ a kara akara na mbụ na ngwa ngwa ha chọpụtara na ụfọdụ ọrụ dakọtara na ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na ndị nrụpụta ama, mana ọ bụghị ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ọ dabara nke ọma, ihe niile gbanwere mgbe Google were mpi oke ehi ahụ ma kwe nkwa ịmalite ngwa maka gam akporo, ngwa nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike iwunye na ngwaọrụ ha, n'agbanyeghị ndị na-emepụta ya, iji jiri ozi ederede bara ụba. Ngwa a, seta usoro iwu na ndị na-emepụta ama na ndị nrụpụta ọrụ ga-ekwenye na onye ọrụ ahụ abanyeghị na nsogbu enweghị nsogbu.
Na Machị 2020, Google gbanwere ngwa Ozi dị na Storelọ Ahịa Play, iji nye nkwado maka RCS. Iji jiri usoro iwu ọhụrụ a mee ihe, ọ dị mkpa ka onye ọrụ ọchụchọ ahụ nwee nkwekọrịta na ndị isi ọrụ, nkwekọrịta nke emebegogo opekata mpe n'etiti ndị atọ kachasị na Spain dịka Movistar, Orange na Vodafone.
Iji nwee ike iji usoro a, ọ dị mkpa na ọnụahịa ahụ, ma onye na-ezigara ya na onye nata ya, dakọtara na usoro aMa ọ bụghị ya, onye nnata ahụ ga-enweta ozi ederede nkịtị na-enweghị ụdị ọdịnaya ọ bụla, ozi nke ga-akwụ ụgwọ maka onye zitere ya, dịka nkwekọrịta ọ kwadoro ya na onye ọrụ ya. Usoro RCS zuru oke n'efu n'adịghị ka ọdịnala SMS.
Ma ngwa Google Ozi na nke ndị nrụpụta dị iche iche nyere na-akpaghị aka ịchọpụta onye n'ime ndị anyị kpọtụrụla nwere nkwado maka RCS. Isan̄a didie idiọn̄ọ? Dị mfe. Mgbe ị na-ezipụ ozi ahụ, anyị ga-pịa igodo izipu ozi, nke dị n'akụkụ aka nri nke igbe ederede. Ọ bụrụ na enweghị akụkọ pụtara n'okpuru akụ ahụ, onye nnata nke ozi anyị ga-enweta ozi multimedia zuru ezu.
Ọ bụrụ na onye natara ozi anaghị arụ ọrụ a, ma ọ bụ site na onye ọrụ ha ma ọ bụ site n'aka onye nrụpụta ama ha, SMS ga-apụta ọ bụrụ naanị na anyị na-ezite ederede naanị.
ma ọ bụ MMS ọ bụrụ na anyị na-eziga ụdị faịlụ ọ bụla nke multimedia.
Nke ahụ na-enye
Site na usoro iwu ọhụrụ a, anyị nwere ike izipu ụdị faịlụ ọ bụla, ọ bụrụ ihe onyonyo, vidiyo, faịlụ ọdịyo, GIF, akwụkwọ mmado, emoticons, mepụta otu, kesaa ọnọdụ ahụ, kesaa kọntaktị site na usoro a ... ihe a niile nke nwere oke ịgba nke 10 MB. Banyere oku vidiyo, a tụlekwara ohere ahụ, mana n'oge ahụ ọ nweghị.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, a na protocol na-enye anyị otu uru dị ka ọ bụla ngwa ngwa ngwa. E wezụga nke ahụ, kọmputa na mbadamba dị, ya mere, anyị ga-enwe ike iso ndị enyi anyị na ndị ezinụlọ nwee mkparịta ụka dị ka a ga - asị na anyị na - eme ya site na ekwentị anyị.
Etu esi enyere ma ọ bụ gbanyụọ ozi RCS
Ozugbo ị wụnye ụdị nke gam akporo dị na Storelọ Ahịa Play, usoro RCS ga-adị njikere ka anyị nwee ike iji ya, ebe ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwụsị ya, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Anyị na-enweta ngwa ahụ Ozi.
Pịa na isi atọ dị na akuku aka nri nke ngwa ahụ wee pịa Ntọala.
N'ime Ntọala, anyị nweta menu Ọrụ nkata.
N'ime menu a, ọ bụrụ na onye ọrụ anyị kwadoro RCS, a ga-egosipụta okwu Ọnọdụ Njikọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ pụtara na anyị ekwentị ọrụ adighi enye nkwado ma ọ bụ ị ga-akpọ ha ka ha rụọ ọrụ ya.
Iji gbanyụọ ya, naanị anyị ga-agbanyụ ọkụ na aha ahụ Kwado atụmatụ nkata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Kedu ihe bụ RCS na gịnị ka ọ na-enye anyị
Ọfọn, m ka na-eji SMS. "Unlimited" gụnyere n'ọtụtụ ntinye onyinye nke ndị isi ọrụ (Oroma + € 1 ọnwa). Anaghị m ahụ uru na Wsapp na ọ bụrụ ọghọm.
Etu esi biputere foto panoramic na Instagram
Ntuziaka Conlọ Ejikọtara: Ngwa kachasị mma